सार्वजनिक लेखा समिती सभापति शाह को प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न केक काटद हातकापेन ?::Independent News Portal from Nepal.
कञ्चनमा २५ शैयाको अस्थाई क्वारेन्टाइन निर्माण
सार्वजनिक लेखा समिती सभापति शाह को प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न केक काटद हातकापेन ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ६९ औं जन्मदिन तेह्रथुममा तामझामका साथ मनाए । हेलिकप्टर चढेर जन्मदिन मनाउन तेह्रथुमको आठराई पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सभापति भरत कुमार शाह टिप्पणी जन्मदिनको नाम मा के नेपाल को नक्साको केक काटनु कस्तो खालको नैतिकता हो ?
केक नै हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर लैजानुपर्ने भन्दै आश्चर्यमा परेका जनता, जब नेपालको नक्सा आकारमा बनाइएको केक नै काटेर प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मदिन मनाए तब झन् आश्चर्यमा परे । प्रधानमन्त्री ‌ओलीले ‘नेपाल’को नक्सा नै काटेर उत्सव मनाएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
जन्मदिन परिवारमाझ मात्र मनाउने आचारसंहिता जारी गरे पनि पार्टीका नेताहरु र मन्त्रीहरुसमेत लिएर आठराई पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाकै आचारसंहिता उल्लंघन गरे भन्दै आलोचना भइरहेका बेला एकाएक नेपालको नक्सा आकारमा बनाइएको केक नै काटेको तस्वीर र भिडियो सार्वजनिक भएपछि आलोचना भएको हो
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले आक्रोश पोख्दै लेखेका छन्, ‘बाले देश खाए’, ‘देशको नक्सालाई टुक्रा पारेर खुसी बाँडदै प्रधानमन्त्री ज्यु’,लाई सभापति भरत कुमार शाह ले खेद प्रकट गर्दै ‘देशको नक्सालाई ‘केक’ बनाएर काट्ने प्रधानमन्त्री ओलि लाई पदमा बस्ने नैतिकता नभएको बताएका हुन ।’
प्रकाशित मिति : सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६ , १०:२३ बजे
कपिलवस्तु कारागारबाट नौ जना कैदीबन्दी रिहा
गरिबीका जनतालाई राहत दिन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शाहको सरकारलाई आग्रह